Indlu yeKhabhinethi-Ski House kufuphi neWindham
Ikhabhinethi ibekwe ngasemva, ingasese, ithokomele ngendlela engakholelekiyo kwaye inothando olumangalisayo. Yindawo yokudibanisa kwakhona kunye nokutshaja kwakhona, ukuphulaphula umlambo kwaye uve umoya ngemithi kwaye uzibandakanye kwisidlo sasemini esicothayo kunye nokuhamba okude kwaye umangaliswe ngokwenene kwiiCatskills. Kukho ukukhenketha ehlotyeni, ukutyibilika ebusika, ukutyibilika ekhephini, umoya omtsha weentaba kunye nobusuku obumnyama obuneenkwenkwezi.
Le yindlu, kwaye ungayiphatha ngolo hlobo. Kodwa ukuba uyeka, kwaye unikezele kumandla esithuba esidalwe ngothando, oku kuya kuziva ngathi likhaya.
Silandele kwi-IG! @thehunterhouses
Ikhabhinethi yibhedi ezimbini, ikhabhathi yomthi yokuhlambela enye eyakhiwa ngeminyaka yoo-1930 kwaye isandula ukulungiswa. Sikwindawo encinci yaseWindham, NY ebizwa ngokuba yiMaplecrest, malunga neyure ezimbini ezinesiqingatha emantla eNYC kunye nemizuzu elishumi ukusuka kwiintaba zombini zeHunter kunye neWindham ski.
Sikufutshane neevenkile kunye neendawo zokutyela eWindham, Hunter, kunye needolophu zaseTannersville kwaye zifikeleleka ngokulula ukusuka kwindawo yaseHudson. Sikwabekwe kufutshane neKaaterskill Falls, North-South Lake, Colgate Lake (esiyithanda kakhulu), iCD Lane Park, kunye ne-1/4 yeemayile ukusuka kwindlela yokunyuka intaba yeBlack Dome Mountain.
Indlu ibekwe kakuhle nayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale kamnandi, kubandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, iimveliso zokuhlambela ze-Avalon Organics, umdlali werekhodi, imidlalo yebhodi, iincwadi, kunye ne-intanethi/i-Netflix enikwe amandla iTV.
Sikwakufuphi nomlambo omncinci, sinendawo yomlilo yangaphandle kwindawo edadayo, ishawari yangaphandle, indawo yokushisa yamalahle, indawo yokuhlala yangaphandle egqunyiweyo kunye nendawo yokutyela, kunye neyadi evulekileyo yazo zonke iintlobo zokutshiswa kwelanga kunye nemidlalo.
Zonke iilineni (iitawuli, iishiti, iiduvethi) zibonelelwa yiCltiver Goods.
Bonke oomatrasi basuka eTuft & Nenaliti.
Ndicela uhloniphe umzi wethu nezinto zethu. Ixesha elininzi kunye nomzamo uye wenza ukuba le ndawo ikhululeke kangangoko kwaye sinethemba lokwabelana ngayo ixesha elide.
** Ukuba awuyifumani imihla oyikhangelayo, nceda ujonge kolunye uluhlu lwethu -
IGreenhouse - airbnb/h/thehuntergreenhouse
IBarnhouse - airbnb/h/thehunterbarnhouse**